Khayre oo dhagax-dhigay Mashruuc dhismo oo Qadar maalgelinayso [Sawirro]
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa maanta daah-furay mashruuca dhismaha waddooyinka isku xira Muqdisho iyo magaalooyinka Jowhar iyo Afgooye ee maamul gobaleedyada Hir-shabeelle iyo Koonfur Galbeed.
Wadooyinka muhiimka Muqdisho oo la xiray iyo ciidamo lagu daadiyay
Soomaliya 18.02.2019. 10:44
Gaadiidka ayaa loo diiday adeegsiga wadooyinka, iyadoo madaxda sare ee dowladda ay...
Madaxweyne Farmaajo oo hortagaya Barlamanka Federaalka Soomaaliya [AKHRI]
Soomaliya 20.10.2017. 12:16
Amiirka Qadar oo la kulmay Khayre, balan-qaadna u sameeyay DF
War Saxaafaded 15.12.2018. 17:36
Xaflad lagu caleema-saarayo Lafta Gareen oo Baydhabo ka socota
Soomaliya 16.01.2019. 11:58